nei iwe uchida kushandisa muchina bvunzo?
Kuru Kushandisa Michina Sei Ungade Kuzvigadzirira Bvunzo?
Sei Ungade Kuzvigadzirira Bvunzo?
Sei iwe uchigona kuita muchina bvunzo? Ndeapi mabhenefiti atinowana neye test automation?
Kazhinji kana vanhu vakapinda mukuyedza kunoitwa otomatiki, tarisiro yavo huru inochinja kubva mukugadzira bvunzo dzakanaka kuona kuti iyo otomatiki kodhi inogona kuita uye kumhanyisa bvunzo.
Munguva yesprint apo nhengo dzechikwata dziri pasi pekumanikidzwa kuendesa ngano mune yakatarwa nguva furemu, kazhinji kazhinji haina kukwana nguva yekuyedza zvese zvakarongwa zviitiko, ndoda kunyora zvinyorwa zveyedzo zviyero kuyedza mashandiro matsva.
Tinogona kukomberedzwa nehumwe ruzivo rwebasa, kukodha, kuongorora, kuita uye kukanganwa nezvechikonzero chikuru sei isu tinogadzira bvunzo!
Nei tichigadzira bvunzo?
Uyu ndeimwe yemibvunzo yandinobvunza pandinobvunzurudza vanenge vachida kukwikwidza kuTest Automation basa uye chakandishamisa, vakawanda vanenge vachida kukwikwidza vanoita kunge varikusuwa chikonzero chakakosha uye chakakosha kuita bvunzo. Mimwe yemhinduro dzandinowana kubva kuvamiriri ndeyechokwadi, asi zvakadaro haisi mhinduro yandiri kutsvaga. Mimwe yemhinduro dzandinowana kumubvunzo uri pamusoro ndeidzi:
Wedzera Bvunzo Kuvhavha
Mhinduro iyi inoshanda, asi isu tinotsanangura sei kufukidza? Kana isu tine bvunzo zana, tingaite sei kuyera chikamu kufukidzwa?
Uine yakura bvunzo otomatiki tsika munzvimbo, unogona kunge uchimhanya mazana emiedzo munguva ipfupi yenguva.
Nekuda kweizvi, isu tinokwanisa kugadzira mamwe mabvunzo ekuyedza, zvimwe zviitiko zvekuyedza uye kuyedza nedata rekuwedzera rechinhu chakapihwa uye nekudaro tiwane chivimbo chekuti system irikushanda sezviri kutarisirwa.
Nekudaro, mukuyedza uye kunyanya bvunzo otomatiki, mimwe miedzo hainyatso kureva mhando iri nani kana mukana wakawanda wekuwana madhiragi.
Mune imwe posvo naMartin Fowler, kwaanodzinga Kwayedza Kuvhara , anodaro
Kana iwe ukaita imwe nhanho yekuvhara tarisiro, vanhu vanozoedza kuiwana. Dambudziko nderekuti huwandu hwekuvhara huwandu hwakanyanya nyore kusvika nehuremu hwekuyedza. Padanho risinganzwisisike rauinaro AssertionFreeTesting . Asi kunyangwe pasina izvozvo unowana bvunzo zhinji uchitsvaga zvinhu zvisingawanzoenda zvisirizvo zvichikukanganisa kubva pakuyedza izvo zvakakosha.
Mhinduro iyi ndeyechokwadi sezvo iwe uchikwanisa kushandisa yakakosha nguva uchiita inonakidza yekuongorora kuyedza apo iyo otomatiki bvunzo dziri kumhanya. Nekudaro, pachinhu chitsva chakagadzirwa, zvinogona kutora nguva yakareba kuti zvinyorwe zvinyorwa zvine otomatiki pane kuyedza chimiro zvacho nemaoko munguva yekutanga.
Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti kuchengetedza nguva kubva ku otomatiki bvunzo, zvinoda kwekutanga kuwedzera simba mukunyora zvimisikidzo bvunzo, kuve nechokwadi chekuti kodhi yakaongororwa, uye kuti hapana hiccups mukuitwa kwema automated bvunzo.
Tsvaga Zvimwe Bugs
Mhinduro iyi inondinetsa dzimwe nguva sezvo ndisati ndamboona chero metric inoratidza kuti paive nemamwe mabhugi akawanikwa nemuchina pane kungwara / kuongorora. Automated bvunzo kazhinji dzinoongorora chero kudzoreredza musystem mushure mekunge kodhi nyowani yaitwa.
Iko kunogara kune mukana wakawanda wekutsvaga mabugs mune matsva maficha pane mukuita basa. Uyezve, pane zvimwe zvikonzero nei otomatiki bvunzo dzinokundikana kuwana hurema
Tsiva Manual Testers
Iyi ingangoita mhinduro yakaipa kwazvo yandakanzwa zvine chekuita nei tichigadzira bvunzo. Iko kune musiyano wakajeka pakati pezvinoitwa neyekushandisa bvunzo uye izvo zvoga otomatiki bvunzo dzinoongorora. Kuzviongorora kuyedza hakusi kuyedza, iko kuongorora kwechokwadi.
Kuti tikwanise kushandisa muchina bvunzo, tinofanirwa kuziva mhedzisiro inotarisirwa kuitira kuti titarise mhedzisiro kana isiriyo mhedzisiro. Izvi ndizvo zvinotipa chokwadi kana nhema, zvakanaka kana zvisina kunaka, kupfuura kana kukundikana.
Kuedza kune rimwe divi chiitiko chekuferefeta, kwatinogadzira uye kuita bvunzo panguva imwe chete. Zvinhu zvakawanda zvinogona kuzvibata zvakasiyana uko kungotariswa nemunhu anoyedza.
Manyanzvi emawoko testers anogara achidikanwa nekuda kwepfungwa dzakasiyana uye kugona kubvunza iyo system.
Kunyangwe zvoga zviedzo zvichikwanisa kutipa mhinduro nekukurumidza uye kutinyevera nezve hutano hwechikumbiro, kuti tikwanise kudzosera chero kodhi yekuchinja iyo yakaputsa sisitimu, kuyedzwa kwayedza pachayo hakuiti kuvandudza mhando. Kungoti nekuti isu tine yakura bvunzo otomatiki munzvimbo hazvivimbise kuti hapana zviputi zvinopukunyuka mukugadzirwa.
Tinogona kunatsiridza mhando nekuona kuti zviitwa zvakanaka zvinoteerwa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira kwero rekuvandudza. Hunhu hausi hwekufunga shure; inofanira kubikwa mukati kubva pakutanga. Izvo hazvina kukwana kungovimba nema automated bvunzo kuti uwane mufananidzo wehunhu hwechigadzirwa.
Saka, ndechipi chikonzero chikuru chekuti isu tishandise bvunzo?
Mhinduro pfupi ndeye kudzokororwa . Isu tinoshandisa bvunzo nekuti tinoda kuita bvunzo dzakafanana kakawanda. Iwe ungade here kuita otomatiki bvunzo kana iwe uchizongo mhanya kamwe chete uye kukanganwa nezvazvo? Chokwadika kwete! Iyo nguva uye kushanda nesimba kwaunoshandisa mukugadzirisa bvunzo, ungadai wakazviita nemaoko.
Zvino, nedudziro, isu tinogadzira bvunzo dzinodzokororwa, i.e. regression bvunzo, izvo zvatinoda kuitisa kazhinji.
Saka, inotevera nguva, kana iwe uchida kugadzirisa muchina bvunzo, tora nhanho kumashure uye funga kuti kangani kaungaita iwe kuita iyi bvunzo? Zvakakosha here kuedza kushandura bvunzo?
pixel 2 xl vs v30
adobe flash yeiyo Android 4.4
Akanakisa chikwama kesi yeGoogle Pixel uye Pixel XL
LG G2 yekuKorea ine microSD kadhi slot, bhatiri rinobviswa
Samsung Gear Fit 2 inowana yakakwidziridzwa hombe: moyo-chiyero nzvimbo, yakavandudzwa kurovedza muviri uye nezvimwe
Samsung & apos; s Galaxy Watch Inoshanda 2 inowana monster dhisikaini pamberi pePrime Day 2021
Kufamba Kwevakafa: Nyika Yedu inoita kutanga kwayo paApple neIOS
Google Fi SIM makadhi ari kuwana zviri nyore kutenga
Kubiridzira Webhu Servers - Chidimbu
Wakamboona Magikarp yegoridhe muPokemon GO izvozvi?
Maitiro ekuyerera mitambo kubva kuPC yako kuenda kune Android foni kana piritsi: Diablo 3, Hondo yehondo 4, Chikwata cheMatare
Apple Music iri kupa yemahara mwedzi kune vamwe vakaedza kuyedzwa kwemwedzi mitatu asi havana kunyorera